I-Microsoft Dynamics 365 | Ukuhlanganiswa kwe-CRM & ERP - ITS Tech School
Iyini i-Dynamics 365?
I-Common Data Model
Ukuhlanganiswa ne-Office 365
Iyiphi imali eyenziwa yi-Microsoft Dynamics 365?
Amabhizinisi namuhla afuna ubunzima futhi alungele ukusabela ekuguqulweni kwedijithali. Bobabili izinhlangano ezincane nezinkulu zizuzisa izinhlaka ezinjalo ezilula zonke imisebenzi yazo kalula ukuze zikwazi ukugxila emibonweni yebhizinisi ebalulekile ekuzuzeni izinzuzo. Ukuma phakathi kokuguqulwa kwedijithali okulindelwe kakhulu ezimweni zamanje kwakuyi-Microsoft Dynamics 365.
Nge-Microsoft ukukhipha i-Dynamics 365, zonke iziphakamiso sezifinyelele ekugcineni. Ukwakhiwa ngenguquko yedijithali, i-Microsoft Dynamics 365 ilindele ukusiza amabhizinisi angenawo i-CRM (Ukuphathwa KwamaKlayenti WezokuThengisa) noma i-ERP (Ukwaziswa Kwezinkampani Zomsebenzi), nokho ukuxuba kokubili. I-Dynamics 365 iyinhlangano ehlose i-ERP ne-CRM ehlose amafu okuhloswe ukuthi ikwazi ukuvumelanisa nokuxazulula izixazululo.
I-Microsoft Dynamics 365 isebenza ukunikeza isiteleka ezinhlanganweni, okokuqala, imisebenzi yazo. Iphuma emshinini wakho webhizinisi ukuze ifane nesimo sayo nesakhiwo. Kancane kancane, uzothola izixazululo zangokwezifiso ozidingayo ku-Microsoft AppSource.
Yayiqhutshwa ngaphansi kwegama lekhodi - Madeira. Umkhiqizo uhlanganisa izizathu ezimbalwa zezicelo ezifakiwe ezinikeza futhi ziqondise amandla amakhono ahlukahlukene okufana nokusebenza, ukubonisa, izimali, izinzuzo zezinsizakalo zensimu, ukwandisa ukuzithokozisa kwenzuzo kanye nokuzuza kwamakhasimende. Babizwa njenge-Dynamics 365 yezinhlelo zokusebenza, i-Dynamics 365 ye-Field Service, i-Dynamics 365 yokuthengisa, i-Dynamics 365 ye-Project Service Automation ne-Dynamics 365 ye-Service Customer.
I-Microsoft Dynamics 365 inesimodeli sedatha evamile esinikeza ukuhlanganiswa okuqinile ne-Microsoft Office 365 kanye nezinhlelo zokusebenza zebhizinisi ezahlukene nge-API yezikhungo. I-Cortana Intelligence, I-Power BI ne-Intanethi yeZinto yilowo nalowo isikhungo esithile ingxenye ye-Microsoft Dynamics 365. lapha. amaklayenti angasebenzisa izinhlelo zokusebenza kwesinye isitolo - i-Microsoft AppSource.
I-Microsoft Dynamics 365 inokuhlanganiswa ngokushelelayo ne-Office 365, ikakhulukazi nge-Outlook. Ungathumela ngokuqondile amarekhodi, imibiko kanye nokucela okuvela ku-Outlook. Ungakwazi futhi ukulungisa nokuguqula amarekhodi ngaphandle kokushiya ikhasimende le-imeyili. Ungakwazi futhi ukubona ama-docs ahlobene, isimo se-akhawunti sabo bonke abazuzayo ebhawulweni lomgwaqo lapho uthumela amakhasimende amaningi. Izingxenye ezifananisiwe zenza lokhu kuhlanganiswa kusebenze okungavamile.
Kunezinguqulo ezimbili ze-Microsoft Dynamics 365, Enterprise kanye neBhizinisi ukukhululwa. Uma kwenzeka ukuthi izinhlangano zakho zinamakhasimende angaphezu kwe-250, i-Enterprise Edition izofanelekela ukuxhumana kwakho. Naphezu kweqiniso lokuthi, uma inhlangano yakho inezixuku ze-10 kuya ku-250, ukukhishwa kwebhizinisi kuzosiza isidingo sakho. Njengoba i-Business Edition ibhekene nezinhlangano ezincane, ngale ndlela ihlanganisa iDynamics 365 yezezimali. Ngenguqulo ye-Enterprise, i-Operations 365 inikezwa futhi Izimali azikho.
Kumakhasimende aphelele, i-Business Edition evumela i-$ 50 iklayenti ngalinye ngenyanga. Amaklayenti alula angakuzuzisa ku-$ 5, iklayenti ngalinye ngenyanga. Ngenkathi i-Enterprise Edition ifika emalungiselelweni amabili - uhlela i-1 ihlanganisa zonke izingxenyana ngaphandle kwemisebenzi. Ilinganiselwa ku-$ 115 ngeklayenti ngayinye inyanga. I-2 ilungiselelo ifaka konke okufaka phakathi Ukusebenza futhi inenani njenge-$ 210 iklayenti ngalinye ngenyanga. Amaklayenti alula angakuzuzisa ku-$ 10 iklayenti ngalinye ngenyanga.
Lokhu kwamemezela kakhulu ukuthi 'ukuguqulwa kwedijithali' kuhle ukushintsha kokubili Ukuphathwa Komthengi Kwekhasimende kanye noHlelo Lwezinkampani Zokuhlela Izinhlangano. Lezi zintuthuko ziyamangalisa futhi kukhona okumele zigcine iso. Izinguqulo ze-Microsoft zangaphambili ze-CRM ne-ERP zisesezinhlangothini ezisekelwayo kanye nokuthuthukiswa kwamuva.
Isakhiwo se-SharePoint 2016: Yini entsha kubathuthukisi?